Nhau Yedu - 2019 NAB Ratidza Nhau neBroadcast Beat. Mutasviki wezveNhepfenyuro weNAB Ratidza, Mugadziri weNAB Ratidza LIVE
musha » Story Our
Ryan Salazar, Muvambi Magazini Beat Beat
Uropi hwechikwata-uye-chinouya mumiririri vezvemabhizimisi Ryan Salazar, Broadcast Beat inotora niches kuti dzimwe dzimba dzakaisa kunze uye dzichigamuchira misika itsva uye teknolojia inogadzira. "Broadcast Beat Magazine yakagadzirirwa kupa munhu wese zvese nyaya dzekushanda sezvinoitika," Inobata Salazar. "Fungidzira, mazana evatungamiri vanofambisa uye makambani ehukama hwevanhu vose ... vose vakaiswa panzvimbo imwe yekugoverana kushandiswa kwemashizha news! Mukuwedzera, Broadcast Beat ine vanyori vashandi vanonyora zvinyorwa zvepakutanga zuva rimwe nerimwe. Ava vanyori vakanyora pamusoro pezvinyorwa zvose zvinotungamirira uye e-bhuku mumabhizimisi! "
Content Creation, Content Management uye Kubudiswa Kwezvakagadzirwa - ndeye ZVOSE ZVAKAITWA! Chinhu chakakosha munyaya dzekutengeserana uye kuziva imwe chete iyo iyo inokosha zvikuru. Vanotaura kuti kuziva hafu yehondo - takufukidzira kwehafu iyo NEVANHU!
Broadcast Beat yave yatsiva mabhuku ekare akatsvaga kuparadzirwa kwemashoko ekubudisa shanduro sepakati. Hatisi kungoenda kunowana nhau - iri kuendeswa kune imwe nzvimbo yepawebsite yedu! Broadcast Beat inobatanidza mimwe michina inoratidzira pasi pose uye mumatambudziko mazhinji, nekutengesa mavhidhiyo paIndaneti kubva pakuratidzira pasi.
"Isu tine ukama nemamwe makambani makuru ehurumende, mashambadziro nevashambadzi, kusanganisira masangano akaita seNational Association of Broadcasters (NAB), Society of Motion Picture & Television Engineers (SMPTE), National Academy of Television Arts & Sciences (NATAS) nezvimwewo, "anodaro Salazar.
Indaneti inoda izwi - uye Broadcast Beat iripo kuti ipe iyo. Kunze kwezvinhu zvose zvaunotarisira kubva kune zvitubu iwe unogona kuvimba iye zvino kana munguva yakapfuura, vaverengi vanofadzwa nekuona kudarika kwezvinhu zvakabva kune teknolojia kusvikira kune whimsical uye kwose kwose-pakati. Broadcast Beat inotarisa michina itsva uye inobudirira uye inozvipa iyo kubva pakuona iyo inofarira vose vari mune yebhizimisi nevari kunze.
Kufunga nezvekuchinja mabasa mukati memhizha? Broadcast Beat ine mitsara yeHot Jobs iyo isingobati ziso rako asi inogona kukuisa mu "movers-and-shakers" yeboka uye uwedzere mari yako! Tsvaga basa rakakwana risingazokutsigiri iwe chete asiwo rive mutambo wakakodzera webasa rako idzva! Cross-train kuti uwedzere ruzivo rwako ruzivo uye ruzivo rwehutano asiwo wehupfumi hwako! Basa iri kunze uko - CHITSA CHINO chekuchinja kune zviri nani!
Kunyange zvazvo mutsara wekuti "Cloud" wakaonekwa uye wakaita sokuti wakakurumidza kushandiswa neuse ad nauseam, remangwana rezvinyorwa zvevhidhiyo nekuzadzisa chido chemafoni efoni uye makombiyuta anovimba neMakore kuitira kupa vashandi vemazuva ano izvo zvavaida nguva dzose - zvakagadzikana Nguva uye kupi kwazvinenge zvakakodzera kuti vazvione. Ini ndiri kunyange chikamu chesangano guru rinofambidzana neGuru - kuzivikanwa kwekuti Broadcast Beat ichabatsira kupararira.
Nzvimbo dzakawanda, dzakawanda zvokufukidza-asi Broadcast Beat ichavepo kuti uone kuti uripo! Nhau dzemazuva ese dzichakubatsira kuti uwedzere kushandura pane zvigadzirwa zvinoshanduka zvemashizha kubva pane zvishoma kudarika kwekuchinja kukuru! Nevanyori vane ruzivo vanoita kuti iwe uve nezvakanyatsodzidziswa sezvaunofanira kunge uri mumusika wevesheni! Pane zvakawanda zvebasa raunofanira kuita - kuitira ikozvino, chengetedza ruzivo rwako ikozvino uye gara uchivharirwa mukati!